Mufananidzo 8 Blank Flange
Kushanda: Threaded flanges anoshandiswa uko kwakaoma kusungira kana kutadza kusunganidzwa, senge tambo dzakapetwa dzinoshandiswa kuchengetedza iyo yakakosheswa pombi. Uye zvakare, Iyo haifanire kushandiswa pane mapaipi nekudzokorodza tembiricha kuchinja kana kupfuura 260 ℃ uye pazasi -45 ℃ zvakare.
Iyo yakanakisa mhando ndeyekucheka uye yepakati ndiro, kukanda uye kugadzira kune zvakati kwanyanya.
Kushanda: Flanges zvikamu zvakakosha zvezvakawanda zveinjiniya uye mapaipi ekugadzira mapurojekiti. Inoshandiswa munzvimbo zhinji, dzakasiyana, senge kutakura (mapaipi, ngarava) epeturu, gasi, mvura, nezvimwewo, zvivakwa zvavo zvekugadzira uye zvesimba rekugadzira magetsi, makemikari, uye mafetiraiza emakemikari. , uye zvinhu zvavo zvakare zvakasiyanasiyana (yakaderera kabhoni simbi, yakaderera alloy simbi, simbi isina chinhu, simbi yepamusoro yesimbi, isina-ferrous simbi, kana zvakadaro) zvinoenderana nerudzi rwemvura uye nzvimbo yebasa.
Kushanda: Flanges zvikamu zvakakosha zvezvakawanda zveinjiniya uye mapaipi ekugadzira mapurojekiti.
Weld mutsipa flange inonyanya kushandiswa mune yepakati, yakanyanya kumanikidza mapaipi kubatanidza, mazhinji butt butt weld flange nemutsipa anonziwo munyatso flange.
Kushanda: Huru basa rebofu flange ndeyekuparadzanisa yekugadzira svikiro. Izvo zvinodzivirira kuvhara-vharuvha kuvhara kwete zvakanyanya, ndokukanganisa kugadzirwa, uye kunyange kukonzera tsaona.
Slip pane flange, inonziwo SO flange. Imhando yemasiraidhi pamusoro pepombi ine dhizaini yemukati yakati kurei kupfuura pombi. Sezvo dhayamita yemukati yeiyo flange iri yakati kurei kupfuura iyo yekunze dhayamita yepombi, iyo SO flange inogona kusunganidzwa zvakananga nemidziyo kana pombi ne fillet weld kumusoro uye pasi kwetambo. Iyo inoshandiswa kuisa pombi mukati mehomwe yemukati yeiyo flange.
Chigadziko chiri kuchema Flange
Socket weld flange yakareruka seSF flange, ine nzvimbo yakadzikira (sebendekete) mubhureji, iyi pfudzi rinoshanda segwara rekumisa kudzika kwepombi yakaiswa kune iyo flange. Socket Welding flange yakatanga kugadzirirwa yakakwira yekumanikidza madiki madimeter pombi system.